Mpiasam-panjakana : miantso ny mpanohitra hanambatra hery (+vidéos) | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Mpiasam-panjakana : miantso ny mpanohitra hanambatra hery (+vidéos)
Tapitra ny fandeferan’ny mpiasam-panjakana manoloana ny fanaovan’ny FATE be marenina. Niditra lalindalina kokoa amin’ny fandraisana andraikitra amin’ny maha-olom-pirenena izy ireo satria tafalatsaka lalina i Madagasikara. Isan’ireo tsy manantena vahaolana amin-dRajoelina ny mpiasam-panjakana na dia hisy aza ny fihaonany amin’ny Filoha RAVALOMANANA. Mazava manko ankehitriny fa tsy manana finiavana hamaha olana izany ny ao Ambohitsorohitra fa raha ny sitrapony dia eo amin’io toerana io mandrakizay ny tenany. Isan’ny melohin’ny mpisam-panjakana ihany koa ny fampiatoana ny ministra avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA satria tsy mitarika mankany amin’ny fitoniana izany.
Manomboka eto dia miantso ny firaisan-kinan’ny hery rehetra ny mpisam-panjakana ary izay manohitra ny fitondana ihany no antsoiny satria iombonana ny hevitra fototra dia ny fandraisana fepetra amin’ireo nambotry Firenena tao anatin’ny telo taona. Hisy arak’izany ny fivoriam-be ho karakarain’izy ireo hampivondronana ireo hery mpanohitra ireo ka ny alarobia 26 jolay no hanatanterahana izany.
Efa nisy ny volavolana rafitra tetezamita vaovao natolotry ny mpiasam-panjakana sy ny rafitry ben’ny tanàna manerana ny Nosy eny amin’ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny tanjona dia ny hananganana tetezamita tsy misy fanilihana hitondra mankany amin’ny fifidianana ankatoavin’ny rehetra. Mbola iantsoan’ny mpiasam-panjakana ny tolo-tanana avy amin’ny rehetra izany satria mety mbola misy ny azo hatsaraina ao anatin’io soso-kevitra vaovao io.